बेवारिसे बिरामीको नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. शर्माद्वारा उद्धार - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ बेवारिसे बिरामीको नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. शर्माद्वारा उद्धार
बेवारिसे बिरामीको नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. शर्माद्वारा उद्धार
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७६ कात्तिक ५ गते, ११:१४ मा प्रकाशित
विराटनगर—विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले दर्दनाक अवस्थाको बेवारिसे बिरामीलाई सिरहाको लहानबाट उद्धार गरेका छन् । लहान नगरपालिका–३ मा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बिरामीलाई डा. शर्माले उद्धार गरेर नोबल अस्पताल ल्याए। आईसियुमा राखेर निःशुल्क उपचार गरेका हुन् ।
लहान अस्पताल नजिक भेटिएका करिब ४० वर्षीय वेवारिसे पुरुषको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक थियो । उनको दाहिने खुट्टाको हड्डी पूर्ण रुपमा भाँचिएर घुँडाभन्दा मुनीको भाग छालाको भरमा मात्र झुण्डिएको छ । भाँचिएको खुट्टाको उपचार नपाउँदा घाउमा किरा परेर दुर्गन्ध फैलनुका साथै झिंगाले घेरेको थियो । धेरै दिनदेखि भुँइमा लडिरहेका उनको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक थियो । उठ्न र बोल्नसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेका उनलाई उद्धार गरेर नोबेल ल्याइएको हो ।
लहान अस्पतालमा कार्यरत डा.बृजेन्द्र कुमार शाहले बेवारिसे बिरामीको अवस्थाबारे शर्मालाई जानकारी गराएर उनको उद्धारमा सहयोग गरेका थिए । गम्भिर अवस्थामा रहेका उनलाई लहान अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि नोबेल ल्याइएको थियो ।
शर्माले आपत र अलपत्र अवस्थामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु मानवीय कर्तव्य भएकाले सहयोग गरेको बताए । उद्धार गरेर ल्याइएका बिरामीलाई नोबेल अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार उनको अवस्था गम्भीर छ ।